Shirri Diinaa Dhaaba Kabajamaa fi Jaalatamaa(ABO ) QBO Irraa.. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsShirri Diinaa Dhaaba Kabajamaa fi Jaalatamaa(ABO ) QBO Irraa..
Shirri Diinaa Dhaaba Kabajamaa fi Jaalatamaa(ABO ) QBO Irraa..
Shirri Diinaa Dhaaba Kabajamaa fi Jaalatamaa(ABO ) QBO Irraa Danquu Irratti Akeekkatame Ammaallee Akkuma Itti Fufetti Jira!
Farraa fi Falfallii diinni ABO dhabamsiisuuf jecha, hoogganoota dhabichaa, qondaalota dhaabichaa, miseensotaa fi deegartoota dhaabichaa irratti shiraa oolee bulu kamuu QBO tarkaanfachiisuu keessatti murannoo fi cichooninaan akka hojii qabsoo irratti cimnuuf hamilee keenna ol kaasa malee, hamilee nu dhahee qabsoorraa of duuba nu hin deebisu. ABOn shira diinaa keessaa fi alaan irratti hojjetamaa tureen dhaaba kufee hafee hin beekne, dhaaba Haqaa fi Dhugaa Oromootiin utubamee as gahe dhaaba Dhiigaa fi Lafee gootota Wareegamtoota Oromootiin ijaaramee dha.
“Lafee Sattawwaa Ishemaan Ishee Cabsu” akkuma jedhamu, Diinni Oromoo Oromoo gabroomfatee bara baraan of jalatti harqoota gabrummaa itti fe’ee jiraachisuu yoo barbaade Tooftaa fi Tarsiimoon inni jalqabaa dantabuleeyyii saba biraa fi Oromoo horii malee Horooma Oromummaa hin beekne Oromotti bobbaasuni. Kan ABO ittiin cabsuuf yaalaa jiranis akkuma kanaani.
Akka kanaan, shirri Taankii fi summiin ABO fi miseensa isaa cabsuu dadhabe dhiheenya kana tooftaa jijjiirachuun maqaa balaleffannaa “WBO Shiftaa fi ABO Shanee ” jechuun qaama biyya bulchaa jiran ODPn dhaaba ABO irratti akeekkatamuun waan ifaa fi qabatamaati.
Haaluma kanaan dhiheenya kana Kibba Baha Oromiyaa Godina Arsii Lixaa Ona Shaashamannee Magaalaa Shaaahamanneetti gaafa Waxabajjii 10 bara 2019 ttii hiriirri shiraa shirtootaan balaaleffannaa “WBO fi ABO Shanee” jedhu dura dhaabbannaa Qeerroo Bilisummaa Oromoon fashaluun isaa ni yaadatama. Haa ta’u malee Shira hojjetamaa ture kana keessatti dantabuleeyyii fi ergamtoonni diinaa adda durummaan qooda irraa fudhatanii sochoosaa turanii fi kana boodas abdii hin kutannu jechuun qophii itti aanu irra jiran eenyuun fa’a akka ta’an eeruu jiraattota naannoo fi hojii isaaniitiin warreen harkaaf harkatti qabaman isin biraan geenyaa, kunooti. Jalqaba irratti duubbee irra taa’anii ergama diina irraa fudhataniin namoota qindeessanii kan bobbaasan Sabaan Oromoo kanneen ta’an
1.#Badhaasoo Shunburaa: Badhaasoon sabaan Oromoo dha. Namni kun (Double-faced) waliindhahaa ta’uun nama jireenya isaa guutuu dhiiga ilmaan Oromootiin jiraataa turee fi jiruu dha. Badhaasoon yeroo gara garaatti miseensa paartiilee Oromoo, OPDO, PBO, KFO, ABO Tokkoomee fi ABO ta’uun jiraataa ture. Yeroo dabre yeroo hoogganni ABO gara biyyaatti galaa turetti dirqama diina irraa fudhateen hooganoota ABO Kibbarraan seenan afotti bahee simachuun icciitii dhaabaa baruuf jecha hooganoota faanaa nama dhama’aa turee dha. Badhaasoon ergama isaa erga xumuratee booda ifatti qaama biyya bulchuun badhaasa argateen magaalaa shaashamannee ganda 01ttii lafa kaaree heddu ta’u argachuun warshaa Blocket irratti ijaaratee hojjetaa jira. Ammas ODP faana ta’uun ABO dadhansiisuuf jecha dhagaan inni falaxaa hin jirre hin jiru.
2.#Amaan (Gaaddisaa Lammii) jedhamuun kan beekkamu.: Amaan sabaan Oromoo dha. Innis akkuma Badhaasoo nama waliindhahaa (double-faced)dha. Namni kun tika OPDO amanamaa nama ergama diinaa fudhachuun armaan dura kallattiidhaan Keeniyatti bobba’ee hooganoota ABO achi jiraniin wal qunnamee biyyarraa diinaan ari’amee dhufee na simadhaa, qabaaawuun barbaadaa jedhee hojii dabballummaa karaa ABOtiin barachuun biyyatti deebi’ee jaallan waliin haa hojjetuuf gara biyyaatti itti ergan hunda isaanii bariisaa gaafa biyyatti galee tokko tokkoon iddoo isaan jiranii nama dirqama dhaabaa waliin hojjetu fakkatee mana hidhaatti gursisee dha.
Kana malees Amaan jeneraal Kamaal Galchuu irraa Qarshii Itiyoophiyaa Kuma Dhibba Lama (200,000 ) fudhachuun nama isaafis hojii basaasummaa hojjetaa ture ta’uu isaa afaan isaaniitiin lameen isaaniituu wal himu. Ammas namni kun ABO dadhabsiisuuf jecha, hooganoota ABO fi Miseensota ABO irratti nama adda durummaan shira xaxaa jiruu dha.
3.#Kamaal Waliyyii: Kamaal dura taa’aa Foollee Godina Arsii Lixaati. Innis akkuma Badhaasoo fi Amaan(Double-faced) ta’uun nama hojjetaa turee fi jiruu dha. Namni kun armaan dura miseensa ABO ture sana booda ammoo qaama biyya bulchu ODP waliin osoo hojjetaa jiruu miseensa PBO fi ABO Tokkoomee ta’uun hojjetaa jira. Innis Basaasaa ODP amanamaa ta’uun magaalaa Shaashamannee ganda 01 naannoo mana murtii ol’aanaa Godina Arsii lixaatti mootummaadhaan kaaree 4,000 ol argachuun iddoo hojii itti uumatee jireenya fooya’aa nama jiraataa jiruu dha. Ammas namni kun ABO irratti shira xaxuun ODP waliin ta’ee nama hojjetaa jiruu dha.
4.Wayyamaa: Wayyamaan dhalataa Ona Kofaleeti. Ammaan tana Godina Arsii Lixaa Magaalaa Shaashamanneetti Bulchaa Ganda Kutaa magaalaa Araadaati.Magaalaadhuma Shaashamannee Ganda 01 keessa jiraata. Namni kun hojii fokkataa hojjetaa jiruun saboota biroo keessaa abbootii qabeenyaa gooxii fi garee baanamutti aangoo itti kennuun akka isaan saba biroo:- Guraagee, Walaayitaa fi kanneen biroo hiriira shiraa kana irratti hirmaataniif qajeelfama itti kennee sochoosaa jira.
5.#Abdii Muzayyan: Abdiin sabaan Guraagee dha. Jiraataa ganda 09 Araadaa naannoo Masgidal Hiikam jiraata. Abbaa qabeenyaa cimaa fi yeroo komandpoostii dabre dirqama fudhatee socho’aa tureen sukkaara maqaa ummataatiin samee saamsisuu dha. Ammas dura taa’aa Gooxii ganda Araadaati. Dirqamni nama kanatti addatti kenname saboota Guraagee maallaqaan qindeessee Hiriira shiraa kana irratti akka bobba’aniif kakaasuu dha.
6.#Warquu: Sabaan Guraagee dha. Innis ganda 09 Araadaa naannoo masgidal Hiikam jiraata. Ganda Araadaatti Itti aanaa Abdii Muzayyan ta’ee Gooxii irra hojjeta. Ergamni isaa akkuma Abdii ummata Guraagee ijaaree hiriira balaaleffannaa irratti akka bobbaaauu dha.
7.#Luungoo: Luungoon sabaan Walaatitaa dha. Jiraataa ganda 09 Araadaati. Dirqamni isaa saba Walaayitaa akka hiriira Shiraa kana irratti bobba’an gochuu dha.
8.#Huseenoo: namni kun Sabaan Warjii dha. Jiraataa Ganda 09 Araadaati. Namni kun armaan dura yeroo komand poostii qarshi qabaa diinaa ture. Ammaan tana ODP irraa dirqama fudhateen ummata Warjii Sabaan ijaaree hiriira shiraa kana irratti bobbaasuu dha.
Waan ta’eef ummanni Oromoo bal’aan shira diinotaa fi lukkeelee diinaa kanneen hubachuun QBO irra jirru irratti akka wal tumsinu isiniin jechaa, namoota ergama diinaa fudhatanii socho’aa jiran kanaan hojii diinummaa kanarraa dhaabbadhaan dhaamsa yerooti.
Gochaa farrummaa kana irraa hin deebi’an yoo ta’e ummanni Oromoo bal’aan shirtootaa fi farreen qabsoo tarkaanfii irratti fudhatan isinuu ni beektuun xumurraa Galatooma.